Nwere ike inyocha folda na netwọkụ dị na mpaghara gị ugbu a na VLC beta | Gam akporosis
VLC nwere tụgharịrị n'uche nke ya gaa mma ndị agha Switzerland na-egwu nile di iche iche nke video na ọdịyo formats ebe ọ bụ na e wepụtara na na beta mere na na njedebe anyị nwere ya na a zuru mbipute adịghị anya gara aga. Beta ka na-emeghe ma site na otu emelitere na ozi -akpali nnọọ mmasị na-etinye anyị n'ihu atụmatụ ka a mata, dị ka nke ikpeazụ.
Ejirila VLC ngwa maka gam akporo ka ị nwee ike inyocha faịlụ gị na mpaghara gị na netwọk, ọ bụ ezie na iji nkọwa zuru ezu na-ewepụ ya na arụmọrụ a anyị nwere n'akụkụ. Ebe ọ bụ, na mmelite ọhụrụ a maka beta, ọ na-enye gị ohere inyocha folda na ngwaọrụ ndị akọrọ site na netwọk mpaghara. Kwuo na n'oge gara aga ị nwere ike ịme nke a ma ọ bụrụ na ịnwee njikọ njikọ na faịlụ ahụ.
VLC bụ nnukwu ngosipụta nke nnukwu sọftụwia dị na ya. Ọ bụrụ na ọ meela ọkwa na PC, na gam akporo ọ na-egosi na otu mmepe n'azụ ya bụ ihe kacha mma enwere ike ịchọta. Ọ dị mma, anyị anaghị eche ihu ngwa ahụ na interface kachasị mma na mbara ala, mana ọ nwere nnukwu ikike ịtụba ihe ọ bụla chọrọ n'elu ya, ma ọ bụ vidiyo ma ọ bụ usoro ọdịyo.
Mmelite nke na-enye anyị ohere inyocha folda na kọmpụta kọmputa, na-enye nyocha faịlụ karịrị UPnP, NFS, FTP, SFTP, SMB, Windows Shares na usoro ogbugba ole na ole ọzọ. Beta dịịrị ndị nlele nke ngwa VLC beta ị nwere ike ịnweta site na njikọ a ghọọ nnwale wee budata ngwa ahụ site na njikọ enyere.
Ewezuga nchọgharị faịlụ, ndị ọrụ nwekwara ike ịhọrọ n'etiti gbanwee nkịtị gam akporo interface na nke gam akporo TV.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » VLC maka gam akporo beta na-enye gị ohere ịchọpụta faịlụ gị na netwọkụ mpaghara gị
Supercell nwere ndekọ ọhụụ: 100 nde ndị egwuregwu kwa ụbọchị